महामन्त्रीमा उठ्ने गगनको घोषणा
कांग्रेस नेता गगन थापाले पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका–३० मा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘वडामा आयोजित कार्यक्रमबाट मैले महामन्त्री पदमा उठ्ने घोषणा गरेको छु। मेरै वडा र अग्रजहरूका बीचमा गौरवसाथ यो घोषणा गरेको हुँ।’आफ्नो क्षेत्रबाट सुरु गरेको कामले सफलता पाएको उनले बताए। ‘उम्मेदवारी घोषणाका लागि यो ठाउँभन्दा अर्को पवित्र ठाउँ छैन,’ उनले भने। आफूलाई अग्रज तथा शुभेच्छुकबाट सहयोग मिल्न
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापामध्ये को प्रभावकारी होलान्? भोट दिनुहोस्
म एक समूहको महामन्त्री होइन : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले आफू कुनै एक समूहको महामन्त्री नभएर सबैको महामन्त्री भएको बताएका छन् । बिहीबारको मतगणनाबाट महामन्त्रीमा निर्वाचि थापाले उम्मेदवारी दिँदा एउटा समूहबाट दिएको भए पनि अब आफू सबैको महामन्त्री भएको बताए । अनुमप पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई महामन्त्री बनाउन मतदाताहरु खटेको भन्दै अब आफू खट्ने बताए । ‘एउटा […] The post म एक समूहको महामन्त्री होइन : गगन थापा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
राजधानी दैनिक 1 महिना पहिले
‘मलाई महामन्त्री बनाउन तपाईंहरु खट्नुभयो, अब खट्ने पालो मेरो हो : गगन थापा
काठमाडौं, १ पुस : नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले आफू कुनै एक समूहको महामन्त्री नभएर सबैको महामन्त्री भएको बताएका छन् । बिहीबारको मतगणनाबाट महामन्त्रीमा निर्वाचि थापाले उम्मेदवारी दिँदा एउटा समूहबाट दिएको भए पनि अब आफू सबैको महामन्त्री भएको बताए । अनुमप पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई महामन्त्री बनाउन मतदाताहरु खटेको भन्दै अब आफू खट्ने […]
Reporters Nepal 1 महिना पहिले
सानेपामा नारा : कांग्रेसभित्र क्रान्ति, गगन विश्व महामन्त्री
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा पार्टी कार्यालय सानेपामा नाराबाजी भएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणासँगै सानेपामा समर्थकहरुले विजयीसभा गरेका हुन्। समर्थकहरुले 'कांग्रेसभित्र क्रान्ति गगन विश्व महामन्त्री' लगायतको नारा लगाएका हुन्। गगन ३ हजार २३ मत ल्याउँदै महामन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा शर्मालेले…
कांग्रेस महामन्त्री : ३४२० मत गन्दा गगन २२२७, विश्वप्रकाश १३७६
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदको मतगणनामा गगन थापाले आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेका छन्। ३४२० मत गणना हुँदा थापाले २२२७ पाएका छन्। १३७६ मतका साथ विश्वप्रकाश शर्मा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। कांग्रेसमा दुई महामन्त्री निर्वाचित हुन्छन्। यस्तै डा प्रकाशशरण महतको ११२७, प्रदीप पौडेलको १०३०, डा मिनेन्द्र रिजालले ६०३ र राजाराम कार्कीले ७७ मत ल्याएका छन्। […]
Desh Sanchar 1 महिना पहिले
काँग्रेस महामन्त्री मतगणना अपडेट: गगन र विश्वप्रकाश अघिअघि
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको महामन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ । अहिलेसम्म एक हजार ७ सय ७५ मत गनिसकिएको छ । सानेपास्थित काँग्रेस मुख्यालयमा भइरहेको मतगणनाको पछिल्लो नतिजा यस प्रकार छ : गगन थापा ११८१प्रकाशशरण महत ५९६प्रदीप पौडेल ५४०मिनेन्द्र रिजाल ३१०विश्वप्रकाश शर्मा ७२०
Prashasan 1 महिना पहिले
काँग्रेस महामन्त्री मतगणना : अग्रता बढाउँदै गगन
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनअन्तर्गत महामन्त्री पदको जारी मतगणना अनुसार ५०० मतको गणना सकिएको छ । हालसम्मको नतिजा यस प्रकार छ । गगन कुमार थापा ३२५ प्रकाश शरण महत १६३ प्रदिप पौडेल १७७ मिनेन्द्र रिजाल ८६ राजाराम कार्की १२ विश्व प्रकाश शर्मा १८५
गगन थापाले गराए महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ता
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन कुमार थापाले पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनले शेखर कोइराला टिमबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । थापाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत महामन्त्री पदमा उम्मेदवारीका लागि आफ्नो अवधारणा पत्र समेत सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि सिटौला समूहमा रहेका उनी सो समूह छाडेर कोइराला समूहतर्फ लागेका हुन् । काँग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार मतदान हुँदैछ ।
Ratopati 1 महिना पहिले
गगन थापाले दिए महामन्त्री पदमा औपचारिक उम्मेदवारी
काठमाडौँ- शुक्रबारदेखि सुरु हुने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिँदै गगन थापाले कांग्रेस चुहिएको प्वाल टाल्ने पार्टी रहेको बताएका छन्। कांग्रेस नेताहरुले पटकपटक निर्वासन, जेल, यातना भोगेको उल्लेख गर्दै एउटा विचार बोकेको आधारमा सत्ताले यातना दिने प्रचलन नेपालमा रहेको बताए। नेपालमा कांग्रेसको राजनीति गर्नेहरुले ‘म’को बारेमा होइन, ‘हामी’को बारेमा सोचेको उल्लेख नेता थापाले गरे। […]
दोस्रोपटक महामन्त्री उठ्ने गगन थापाको घोषणा
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन्। १३ औँ महाधिवेशनमै कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्यानलबाट उम्मेद्वार भए पनि पराजित भएका थापाले मंसिरमा हुने १४औँ महाधिवेशनमा पनि उम्मेद्वारी दिने बताएका हुन्। सोमबार काठमाडौंमा महानगरपालिका वडा नम्बर ३० मा आयोजित कार्यक्रममा थापाले महामन्त्री उठ्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। अनौपचारिक […]